Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Cellulite (ဆဲလူလိုက်)
I Have A Saggy Bum, Cellulite "ကျမ "တင်" က တွဲကျနေတယ်ရှင့်၊ (ဆဲလူလိုက်) ပေါ့" လို့ (ဘောလီဝုဒ်) ရုပ်ရှင်မင်းသမီး Sonam Kapoor (ဆိုနမ်-ကပူးရ်) ကနေ ပြောလိုက်တာကို ၁၇-၁-၂ဝ၁၂ ထုတ် (တိုင်းမ်-အော့ဖ်-အင်ဒီယား) သတင်းစာမှာ ရေးလိုက်ပါတယ်။
Cellulite (ဆဲလူလိုက်) ဆိုတာ ဘာလဲ။ တိတိကျကျပြောရရင် "မိန်းကလေး အတော်တော်များများမှာ အပျိုဖြစ်ပြီးနောက် အသားအရေ တွဲပျော့လာတာမျိုးကို စေ့စေ့ငုငုကြည့်ရင် သိနိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုး" ကို ခေါ်ပါတယ်။
နောက်တမျိုးက မင်းသမီးပြောတာမျိုနဲ့ အတူတူဘဲ။ "အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးတွေမှာ ဗိုက်၊ တင်၊ ခြေ-လက်တွေမှာ အဆီတွေ ပိုများလာလို့ ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ပြောင်းလာတာမျိုး" ဖြစ်တယ်။ ဒီအင်္ဂလိပ်စကားလုံးသမိုင်းက ၁၉၂ဝ ကစတယ်။ အလှအပ-ကုမ္ပဏီတွေကနေ သုံးကြပေမဲ့ ဆရာဝန်တွေကတော့ ရောဂါစာရင်းထဲ မထည့်ပါ။ လှချင်သူတွေအတွက်ကတော့ တကယ့်ပြဿနာ ဖြစ်နေတယ်။
အပျိုဖြစ်လာရင် မိန်းကလေး ၈ဝ-၉ဝ% မှာ အဲလိုဖြစ်ကြပါတယ်။ ယောက်ျားလေးတွေမှာ မဖြစ်ကြတာများတယ်။ ဒါပေမဲ့ Klinefelter's syndrome, Hypogonadism ဟော်မုန်းနည်းရောဂါတွေ ရှိရင် ဖြစ်မယ်။ Postcastration သင်းကွပ်ထားရင်၊ ဆီးကျိတ်-ကင်ဆာကြောင့် Estrogen therapy ဆေးပေးနေရင် ယောက်ျားတွေမှာလဲ ဖြစ်မယ်။ Androgen deficiency ဟော်မုန်း နည်းလေဖြစ်လေ။
ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ စာရင်းထဲမှာ ဟော်မုန်း၊ အစားအသောက်၊ မျိုးရိုး၊ စတဲ့အချက်တွေပါမယ်။ ဟော်မုန်းထဲမှာ Estrogen (အီစထိုဂျင်) က အရေးပါမယ် ထင်ရတယ်။ တခြား Insulin, Adrenaline, Noradrenaline, Thyroid hormones, Prolactin ဟော်မုန်းတွေကိုလဲ စဉ်းစားကြတယ်။
ကုသနည်းတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ အားလုံးကောင်းတယ်လို့ မပြောနိုင်ပါ။
• Cellulite creams (ခရင်မ်) လိမ်းဆေးတွေထဲမှာ Methylxanthines (Aminophylline, Caffeine, Theophyilline) တွေပါတယ်။
• Dietary supplements အစာအာဟာရ ဆိုတာတွေထဲမှာ Ginkgo biloba, Sweet clover, Grape-seed bioflavinoids, Bladder wrack extract, Evening primrose oil, Fish oil, Soy lecithin) တွေပါတယ်။ Pentoxifylline, Beta-agonists, Adrenaline, Alpha-antagonists, Amino acids, Rutin, Indian chestnut ဆေးတွေလဲ သုံးတယ်။
• Massage treatments နှိပ်နယ်နည်းကို စက်တွေအမျိုးမျိုးနဲ့ လုပ်ကြတယ်။
• Laser or light therapy လေဆာနည်းလဲ ရှိတာဘဲ။
• Mesotherapy ခေါ်တဲ့ ဆေးထိုးပေးနည်းကို အငြင်းပွါးတယ်။ Collagenase (အင်ဇိုင်းမ်) ကိုထိုးပေးတာဖြစ်တယ်။
• Wraps ကပ်ပေးရတာမျိုးတွေလဲသုံး ကြတယ်။
• Liposuction (လစ်ပိုဆပ်ရှင်) ခေါ်တဲ့ အဆီပိုတွေ စုပ်ထုတ်ပေးနည်း ခေတ်စားနေတယ်။ ဆရာဝန်တိုင်းကတော့ သဘောမတူပါ။
• Pneumatic massages လေသုံးနှိပ်နည်း၊ Heat therapy အပူပေးနည်း၊ Ultrasound (အာလ်ထွာဆောင်း)၊ Radio frequency therapy ရေဒီယိုလှိုင်းနည်း၊ Magnetic therapy သံလိုက်ဓါတ်နည်း၊ Radial waves therapy လှိုင်းနည်း၊ Electrical stimulation လျှပ်စစ်နည်း၊
• FDA ကနေ အသိအမှတ်ပြုထားပြီးသားက Massage and combined laser/massage therapies တွေဖြစ်တယ်။
Grade 1 အဆင့် (၁) ဘာမှ မဖြစ်သေးဘူး၊ အနုကြည့်မှန်ဘီလူးနဲ့ကြည့်မှသာ မတူတော့တာတွေမြင်နိုင်တယ်။
Grade2အဆင့် (၂) အရောင်ဖျော့လာမယ်၊ ပိုအေးနေမယ်၊ ဆန့်နိုင်ကျုံ့နိုင်စွမ်း နည်းလာမယ်၊
Grade3အဆင့် (၃) သိသာမြင်သာနေပြီ။ လိမ်မော်ခွံနဲ့တူလာမယ်။
၁။ Healthy diet ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ အစာကိုသာစားသောက်ပါ။ အဆီနည်းပါစေ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကရတဲ့အဆီသာသုံးပါ။ အသီးမျိုးစုံစားပါ။ ဟင်းသီးဟင်ရွက် စိုစိုစိမ်းစိမ်း စားပါ။
၂။ Regular exercise ပုံမှန် ကိုယ်လက်-လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။ ကိုယ်အလေးချိန် ထိန်းပါ၊ လျှော့ပါ။
၃။ Special clothing အထူးလုပ်ထားတဲ့ Compression garments အဝတ်အစားမျိုး ဝတ်ဆင်နိုင်ကြပါတယ်။
၄။ ခွဲတာစိတ်တာ၊ အစာဖြည့်တာမျိုး စားသုံးတာတွေကို သတိကြီးကြီးထားပါလေ။
အမေရိကားနဲ့ ဥရောပက အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ၉ဝ% မှာဖြစ်နေတဲ့ အဲလို အသားအရေ တွဲကျ-အိပျော့နေတာကို "Cottage cheese syndrome ဒိန်ခဲလို ပျော့စိစိ"၊ "Orange peel skin လိမ်မော်ခွံ" ဆိုပြီး စိတ်ဝင်စားစရာ နာမည်မျိုး ပေးထားတယ်။
ယောက်ကျားလေးတယောက်က သူ့သာမန်ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ တင်ပါးဆုံတက် ပိုကြီးနေပါတယ်။ အဲတာ သာမန် သူများ ယောက်ကျားလေးတွေလို အနေအထားမျိုးဖြစ်အောင် ဘယ်လိုပြုပြင်လို့ရနိုင်ပါသလဲ။ ခွဲစိတ်ဖြတ်ထုပ်လို့ ရနိုင်ပါသလား။ ဒါမှမဟုတ် အားကစားနည်းနဲ့ သေးအောင်လုပ်နိုင်ပါသလား။ ဒီလို တင်ပါးကြီးနေတဲ့အတွက် ငယ်ငယ်ထဲက ဆိုက်ကိုလို ဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ်။
ဘယ်လို အခြေအနေတွေအတွက်ဖြစ်ြဖစ် ကုသနည်းတွေရှိပါတယ်။ အခုလို ခန္ဓာကိုယ် အောက်ပိုင်း-နောက်ပိုင်း ပြုပြင်ချင်တာအတွက်လဲ ရောဂါတော့ မဟုတ်ပေမဲ့ ပြုပြင်နည်းတွေ ရှိတယ်။ ကုသနည်းမှာ ဆရာဝန်တွေကတော့ ခွဲစိတ်နည်းကိုသာ လမ်းညွှန်လေ့ရှိတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းနည်း၊ တခြားနည်းတွေကိုလဲ ကြော်ညာတွေ၊ ဆေးရောင်းတာတွေ မနည်းပါ။ အလှအပအတွက်နည်းဖြစ်လေတော့ တယောက်တမျိုးရှိတယ်။
11. Exercises to Reduce Cellulite in the Butt
12. Exercises to Reduce the Stomach, Butt & Thighs
13. How Do Men Get Rid of Butt Fat?
14. How Does Your Butt Get Flat?
15. How to Get Rid of Fat Folds Under the Butt
16. How to Get Rid of Love Handles & GetaBigger Butt
17. How to Get Rid of Pelvis Fat
18. How to Get Rid of the Fat Rolls Under Your Butt
19. How to Lift & Tone the Butt 20. How to LoseaButt for Guys
1. Buttock Reduction $2.5k
2. Buttock Reduction, Buttock Reduction Surgical Procedure - PlacidWay